Page 322 – Baganthar
Bagan Thar Feb 09
လိပ်ခေါင်းသွေးပါ မီးကွင်းရှာ အလုပ်ကများရသည်ကြား လိပ်ခေါင်းကြောင့် ဦးမိုး အတော်စိတ်ညစ်နေပုံရ၏။ မကြည်မလင်နှင့် လိပ်ခေါင်းသွေးပါသည်မို့ ပုဆိုးပင် သွေးကွက် ထင်နေလေသည်။ အမှတ်မထင် ကျေးဇူးရှင် တိုင်းရင်းသမားတော်ကြီးဦးကြွယ် ပေးသောဆေးနည်းကြောင့် သွေးကျလိပ်ခေါင်း (၇)ရက်ဖြင့် လိပ်ခေါင်ပြန်ဝင်အပြီးပြတ်၍ ယနေ့တိုင်သွေးကျခြင်း၊ လိပ်ခေါင်းထွက်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တိတိကျကျ မသိကြပါသော်လည်း အချို့သော အပင်တို့၏ ဆေးစွမ်းထက်မှုမှာ အံ့ဖွယ်အတိဖြစ်ရပါ၏။ လိပ်ခေါင်းအတွက် သောက်ဆေး (၁) မီးကွင်းဂမုန်း လက်တစ်ဆုပ်စာကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ထမင်းစားဇွန်း(၁)ဇွန်းစာ ...
ငွေရှင်းပြေစာပေါ်တွင် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းမကပ်ထား တိုင်ကြားပါက ဒဏ်ငွေရဲ့ ၁၀%ရရှိမည်
ငွေရှင်းပြေစာပေါ်တွင် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းမကပ်ထားသည့် ဟိုတယ်တည်းခိုခန်းနှင့် စားသောက်ဆိုင်များအား တိုင်ကြားသူတို့ကို ဆုကြေးငွေ သိန်းငါးဆယ်နီးပါးချီးမြှင့်ခဲ့ဟုဆို (၂၀၁၈)ခုနှစ်အတွင်းငွေရှင်းပြေစာပေါ်တွင် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းမကပ်နှိပ်သည့် ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်များကို တိုင်ကြားလာသဖြင့် တုိုင်ကြားသူများအား ဆုကြေးငွေ စုစုပေါင်း ကျပ်(၄.၉၈သန်း) သိန်းငါးဆယ်နီးပါး ပြန်လည်ချီးမြှင့်ပေးခဲ့သည်ဟု ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှသိရသည်။ ငွေရှင်းပြေစာများတွင် အခွန်အမှတ်တံဆိပ်မကပ်နှိပ်ထားသည့် ဟိုတည်တည်းခိုခန်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်များအနေဖြင့် ပထမအကြိမ်ပျက်ကွက်ပါက နှစ်သိန်းဒုတိယအကြိမ်ပျက်ကွက်ပါက ငါးသိန်းတတိယအကြိမ်ပျက်ကွက်ပါက ခုနှစ်သိန်းနှင့်တတိယအကြိမ်အထက်ပျက်ကွက်ပါက ဆယ်သိန်းအထိ ဒဏ်ကြေးများသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ “တိုင်ကြားလာသူတွေကို ဒဏ်ကြေးရဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို ဆုကြေးငွေအဖြစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာပါ။ ဌာနကိုတိုင်ကြားလာသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကို ထုတ်ပြန်ကြေညာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘယ်အခွန်ရုံးမှာမဆို ထိထိရောက်ရောက်တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်”ဟု ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှ ...
ကမ္ဘာ့အအေးဆုံးဒေသ (၁၀) ခု
လူသားတွေဟာ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ ကမ္ဘာနေရာအချို့မှာတောင် အခြေ ချနေထိုင်ကြပါတယ်။ အလွန်ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ကန္တာရဒေသဖြစ်တဲ့အပြင် သောက်သုံးရေအလွန်ရှားပါးတဲ့ Himalayas တောင်တန်းတွေမှာလည်း နေထိုင်သူ တွေရှိနေပါတယ်။ ဒါအပြင် လူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ ကျွန်းတွေ၊ အပင်တွေသာ ဖုံးလွှမ်းနေပြီး လူသားတွေအတွက်ဘေးဖြစ်စေတဲ့ သတ္တဝါတွေရှင်သန်နေတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာလည်း နေထိုင်ကြပါသေးတယ်။ ရာသီဥတု အလွန် ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဒေသတွေမှာလည်း အစုအဖွဲ့လိုက်နေထိုင်ကြတာကိုလည်း ယနေ့တိုင် တွေ့ရှိရပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အရပ်ဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေဟာ သူတို့ နေထိုင်ရာအရပ်ဒေသရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကို ပြင်းထန်စွာခံနေရပေမဲ့ ယနေ့တိုင် ...
ဘဏ်က ဘဏ်အလုပ်မလုပ်ဘဲ အပေါင်ဆိုင် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံ
Bagan Thar Feb 08
ဘဏ်က ဘဏ်အလုပ်မလုပ်ဘဲ အပေါင်ဆိုင် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံ ဟိုနေ့က ဘဏ်တစ်ခုက ဖုန်းဆက်တယ်။ ငွေချေးပါလားတဲ့။ အနည်းဆုံး သိန်း ၂၀၀ ကနေ ၅၀၀၀ အထိ ချေးလို့ ရပါတယ်တဲ့။ စာရွက်စာတမ်းသာပေး ၂ ပတ်အတွင်း ငွေရစေရမယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် မချေးရဲပါဘူး။ ဘဏ်အတိုးက တစ်နှစ် ၁၃ % နှုန်းတဲ့။ သိန်း တစ်ထောင်ချေးရင် နှစ်ကုန်တာနဲ့ အတိုးက သိန်း ၁၃၀ ပေါ့။ သိန်း ...
တရုတ်ကြွေးမြီ ထောင်ချောက်အတွင်း သက်ဆင်းမယ့်အရေး တွေးပူရမယ့် အချိန်
တရုတ်ကြွေးမြီ ထောင်ချောက်အတွင်း သက်ဆင်းမယ့်အရေး တွေးပူရမယ့် အချိန် တရုတ်အပေါ် တင်ရှိနေတဲ့ ကြွေးမြီပမာဏ တရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ဒီချုပ်)အစိုးရကို အလေးအနက်သတိပေးနေပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ဝါးမျို ထိပါးလာနိုင်တဲ့ ကြွေးမြီထောင် ချောက်ထဲ မသက်ဆင်းရခင် အ ကြွေးတွေကို တတ်နိုင်သမျှမြန် မြန်ပြန်ဆပ်ဖို့လည်း တိုက်တွန်း နေကြပါတယ်။ ၂၀၁၈ မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင် ငံခြားငွေကြေး အရန်သိုလှောင်မှု ပမာဏဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၃၅ ...
အရှေ့ တောင်အာရှမှာ အလှဆုံး မြန်မာနိုင်ငံက ဟိုက်ပါရေတံခွန် ရောက်ဖူးခဲ့သမျှ ရေတံခွန်တွေထဲမှာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းရှူးမြို့ အနောက်တောင်ဘက် ၁၂ အကွာ ဟိုက်ပါကျေးရွာအနီးမှာတည်ရှိတဲ့ ဟိုက်ပါရေတံခွန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာသာမက အရှေ့တောင်အာရှမှာပါ အလှဆုံးလို့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်တွေက သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ပန်ချောင်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီး အထပ်ထပ် အဆင့်ဆင့် အသွယ်သွယ် ဖြာကျနေတဲ့ ရေတံခွန်ဖြစ်ပြီး မြင်ရတာ အလွန်ပသဒရှိတာမို့ အရှေ့ တောင်အာရှမှာ အလှဆုံးရေတံခွန်လို့ပြောကြတာ ဖြစ်မှာပါ။ ယခင်က ငြိမ်းချမ်းရေအဖွဲ့တွေ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တာမို့ လူသူအရောက်ပေါက်နည်းခဲ့ပေမယ့် ...
လက္ခဏာဆရာကြီးကိုင်ရို၏ ၁၉၂၅ ခုနှစ်ကဟောကြားခဲ့သော ကမ္ဘာကျော်ဟောကိန်း
လက္ခဏာဆရာကြီးကိုင်ရို၏ ၁၉၂၅ ခုနှစ်ကဟောကြားခဲ့သော ကမ္ဘာကျော်ဟောကိန်း ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ အစ္စရေးသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကြီးကျယ်သောနိုင်ငံဖြစ်လာမည်။အီဂျစ်နှင့်သင့်မြတ်ပြီးနောက် ရာသီဥတုများ တိုးတက်ကောင်းမွန်မည် ။ တူရကီသည် ပါလက်စတိုင်းကို ရှားအကူအညီဖြင့် တိုက်ခိုက်လိမ့်မည် လန်ဒန်နှင့် အရှေ့ပိုးမြို့ရွာများဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မည်။ အမေရိကန်သည် ချမ်းသာသောနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာမည် ။ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစစ်ပွဲကြီးများကို ပါလက်စတိုင်းလွင်ပြင်များ၌ ဆင်နွဲကြလိမ့်မည်။ နိုင်ငံတကာအတွက်သေရေးရှင်ရေးဖြစ်မည်။ရုရှားသည် တရုပ် ပါရှား အီသီယိုးပီးယားနှင့်လစ်ဗျားစစ်တပ်များနှင့်ပေါင်းကာ ပါလက်စတိုင်းကို ...
ယာကူဇာဂိုဏ်းစတားများ လက်သန်း ဖြတ်ပစ်ရလေ့ ရှိတဲ့ အကြောင်းအရင်း
ယာကူဇာဂိုဏ်းစတားများ လက်သန်း ဖြတ်ပစ်ရလေ့ ရှိတဲ့ အကြောင်းအရင်း ယာကူဇာဂိုဏ်းဝင်တစ်ဦးအဖြစ် သိသာထင်ရှားစေတဲ့ အချက်က သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခြယ်မှုန်းထားတဲ့ တက်တူးလက်ရာ တွေတင် မကပါဘူး။ တစ်ကိုယ်လုံး တက်တူးတွေနဲ့ ပြည့်နေပြီး လက်သန်းပါ ပြတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ယာကူဇာ ဂိုဏ်းဝင်ဆိုတာ လုံးဝသေချာပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်ဟာ ယာကူဇာတွေရဲ့ ယူဘစ်ဆူမီလို့ခေါ်တဲ့ ရိုးရာဖြစ်ပြီး လက်ချောင်းဖြတ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ တကယ်လို့ ဂိုဏ်းသားတစ်ဦးက ဂိုဏ်းရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို သွေဖီဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ၄င်းဂိုဏ်းသားကို အပြစ်ပေး ...
လင်က ဗိန္ဓောဆရာ၊ မယားက စုန်းမ
လင်က ဗိန္ဓောဆရာ၊ မယားက စုန်းမ ရှေးရှေးတုန်းက ပြောစဉ်အရ ခုနစ်အိမ်မှာ စုန်းမတစ်ယောက်ရှိတယ်ဟူ၍ ရှေးလူကြီးသူမတို့ရဲ့ ပြောစကားအရ သိရတယ်။ အချို့က ရွာတည်ရာ၌ စုန်းမ မပါရင် ရွာတည်လို့မရဘူးဟူ၍လည်း ပြောဆို ကြတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ မည်သူမျှ တိတိ ကျကျ ပြောရန် ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ တစ်နေ့တွင် မြောက်ဒဂုံ (၃၃)ရပ်ကွက် မစိုး ရိမ်ကျောင်းတိုက်သို့ ယောဒေသမှ ပရိယတ္တိကျမ်း ဂန်သင်ကြားနေတဲ့ ဦးပဉ္ဇင်းတစ်ပါးဟာ မြောက်ဒဂုံ ၃၂ ...
ပညာ မတတ်ရင် တကယ် ခွေး ဖြစ်မှာလား?
ပညာ မတတ်ရင် တကယ် ခွေး ဖြစ်မှာလား? ”ပညာမတတ်ရင် မင်းတို့ခွေးဖြစ်မယ်”လို့ မပြောမိဖို့ ကြိုးစားရမယ်။ ”ကျောင်းမနေချင်ဘူး။ ပညာတတ်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင် မင်းတော့ ခွေးဖြစ်ပြီ။ ဟိုဘက်အိမ်က ကျင်ခါးမောင်ကို ကြည့်စမ်း။ သူများလို စာလေးဘာလေး ကျက်ဖို့ မကြိုးစားဘူး။ အားအားနေ အလေလိုက်နေဖို့ပဲ ကြိုးစားနေတယ်။ ခွေးဖြစ်မယ့်အကောင်” လို့…… အိမ်ဘေးအိမ်က ပွစိပွစိအဒေါ်ကြီး စာမကျက်တဲ့သူ့သားကို ပြောပြောလေတိုင်း ကလေးဘာသာဘာဝ ကျွန်တော့်ကို မြှောက်နေမှန်းသိလို့ တမင် စာကျက်သံကိုမြှင့်ပြီး အော်ခဲ့တာကို ပြန်အမှတ်ရမိပါတယ်။ ...